Inbadan iyo inbadan oo mashaariic ah ayaa kufashilmay sababo laxiriira isdhexgalka bulshada. Tababarkan, Bob McGannon, qoraa, ganacsade iyo la-taliye ayaa kula wadaagaya waaya-aragnimadiisa is-dhexgalka mashruuca. Waxay ku siineysaa talooyin iyo habab aad ku maareyn karto isdhexgalka ama isku dubaridka qaybaha kala duwan ee maareynta mashruuca iyo istiraatiijiyadda xakamaynta. Waxaad ka wada hadli doontaa astaamaha aasaasiga ah ee isku-dhafka mashruuca, waxyaabaha ugu muhiimsan ee la soo gudbiyo ama muhiimadda qorshaynta laga bilaabo bilowga mashruuca iyo isgaarsiinta.
Astaamaha aasaasiga u ah maareynta mashruuca: Is-dhexgalka Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Qaybaha xirfadlayaasha ah iyo shabakadaha ganacsiga waxaa ka go'an heshiiska ka qaybgalka dhalinyarada
horeAasaaska maareynta mashruuca: arrimaha anshaxa
socdaQalab tababar oo cusub: Nidaamka Kala-guurka Wadajirka ah